Ajax Oo Ku Guuleysatay Juventus Turin - TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS »Ajax Oo Ku Soo Laabatay Juventus
Ajax oo ku biiray Juventus Turin
Ajax Amsterdam ayaa dib u dhacday maanta Talaadadii 16 Juventus Turin ayaa ku badisay semi-finalka (2-1). Haddii Cristiano Ronaldo uu furo gooldhalinta Juve, Donny Van De Beek iyo Matthijs de Ligt ayaa u ogolaanaya kooxda reer Dutch inay sii wado wadahadalka.
Inta u dhaxaysa sharka labada kooxood gundhig wareega hore, Ajax ayaa laga saaray ciyaarta. Ajax, kuwaas oo laga badiyay 2-1 guriga lugtii hore ee kulankii Real ee knockout stages, ayaa lagu soo rogay 4 -1 Bernabeu inuu ka hor tago in quarterfinals markii ugu horeysay tan iyo 2002 / 03. Markan, ka dib markii ay barbaro garoonkeeda, ciyaartoyda Ajax tegey si ay u helaan shahaadada ee Turin in ay sii wadaan u quudhin ee Champions League.
Faa'iido xiiso leh oo aan la hubin
habeenkii talaadada, guriga, Juve ayaa isku dayay in ay gaaraan semi-finalka markii saddexaad ee muddo shan sano ah ka dib markii ay barbaro lugta hore (1-1). A-0 0 ku filan si ay u qalanto. Iyo xaqiijinta Cristiano Ronaldo, shan Golden Ball, oo kaliya in ay post dhow, kuwaas oo goolasha u furay ka madaxa inay la soo wareegto goolkiisii ​​126e (28e), u muuqday in lagu ceebeynayo ciyaartoyda ee Ajax.
Laakiin Ajax, taas oo uu ku guulaystay laba ka mid ah kulan 13 Yurub ka dhanka ah Juventus, qayb ka xun jeeda marwada Eve ah, si deg deg ah ku jawaabay Donny Van De Beek, kaasoo dhaliyay goolkiisii ​​seddexaad ee xilli ciyaareedkan ee Champions League (34e). Juventus oo sidaas daraaddeed qaban doonaa lix daqiiqo gaaban. xafiiltanka weli xiiso iyo aan la hubin marka garsooraha ooriyay dhammaadka muddada ugu horeysay.
Inaan laga badin 10kii kulan ee ugu danbeysay ee uu ka horyimid koox ka dhisan Holland, Juve ayaa ku qasbaneyd inay dib ugu soo laabato garoonka inteeda kale, iyagoo doonaya inay qeyb weyn ka noqdaan qeybta labaad. Marka laga reebo ciyaartoyda Massimiliano Allegri ayaa ku dhow inay dhowr jeer isbedelaan, islamarkaana ay ku tiirsan yihiin goolhayahooda. Daqiiqadii 52e, Moroccan Hakim Ziyech ayaa ka toogtay daafaca bidixda islamarkaana si ciriiri ah gacanta ugu siiyay Szczesny gacanta bidix. Shan daqiiqo ka dib, Van de Beek ayaa ka soo toogtay goolka midig, Szczesny ayaana kubada ku riixay kubada.
Waxay aheyd markii ugu danbeysay ee De Lopez oo goolka labaad u dhaliyey Ajax, taasoo u ogolaatay kooxda reer Holland inay bixiso koox kale oo weyn oo Yurub ah, ka dib markii Real Madrid ay xilli ciyaareedkan ku qaadatay semi-finalka. Ajax Amsterdam waxay ku bixisaa kursi armaajada miiska weyn.
Ciyaartii kale ee maalinta, Barcelona hormartay inay semi-finalka Champions League ee ay ku garaacday Manchester United in ay 3 0 lugta labaad ee quarter-final ee Camp Nou. Winners (1-0) lugtii hore ee Old Trafford, Barcelona waxay gaadhi afar dhamaadka markii ugu horeysay tan iyo markii uu labo gool ka Messi (2015e, 16e) iyo gool ka Coutinho (20e) ay mahad 61 dabaaldega.
Halkan waxa laga soo xigtay: http://www.rfi.fr/sports/20190416-ligue-champions-ajax-fait-plier-juventus-turin
27 Garsoorayaasha la doorto ee CANUMX
Taageerayaasha Pogba Caan ka ah, Fanaanada Vinicius ee Neymar - Daily # 437 - VIDEO
23H RTL 17 April 2019 - VIDEO
1 League: Lyon oo halis ku jirta, ciyaartoyda ku jirta weerarka hore
Europa League: kala badhka Arsenal-Valencia iyo Frankfurt-Chelsea